Buugaagta hadda ugu fiican
Buugaag ku saabsan mawduucyada hadda jira
Dooxada Haunting, oo ay qortay Anna Wiener
Dhammaanteen waxaan doonaynay in baandadaas hipster -ka ah iyo geeks -yada kale ee Silicon Valley. Koox ka mid ah carruurta aabbaha oo ku dhawaaqay nidaam dhaqaale oo cusub oo adduunku u dhan yahay oo u janjeedha bulshada samafalka. Waa cusub oo dunida cusub ee teknolojiyadda leh faa'iidooyinkeeda ammaanta leh ...
The Stakes, waxaa qoray Philipp Blom
Adeegsiga ereyga "ciyaarta" ayaa si cad u muujinaya aragtida adduunkeenna inay tahay wax aan gebi ahaanba dhab ahayn. Sababtoo ah wax walbaa waa ciyaar, waxaan nahay degane ku meelgaar ah oo sidaas darteed si dhab ah uma qaadan karno wax walba. Kaliya, nasiib darro, etymology ee ...
Guga Extremadura, waxaa qoray Julio Llamazares
Waxaa jira qoraayaal kuwaas oo waxa ka dhaca adduunku ay leeyihiin cadcad kala duwan, oo ah mowjad aad u kala duwan oo soo noqnoqoshada iyo aragtiyaha dhammaystirka ahi ay na soo gaadhayaan. Julio Llamazares wuxuu ka socdaa maxkamadda sheekooyinka kuwaas oo si dhab ah u dhex mara waaqicnimada suugaanta isla marka ay na daadiyaan ...
Laga soo bilaabo Lazarillo de Tormes ma aanan ka helin buug qarsoodi ah oo leh dan ka weyn kan. Sababtoo ah arrintu waxay la jaanqaadeysaa xaalad adduun oo dhammaanteen na wada haysata tie piiiiii (ha ahaato ukun ama ugxan). Iyada oo masiibo baahsan oo heer walba leh, afar ...